Krizin-tsolika Ao Shily: Vinavina Momba Ny Solika biôlôjika (Biôsfera) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Septambra 2017 4:57 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Mey taona 2007 no nivoaka ny lahatsoratra tamin'ny teny Anglisy)
Nampihena ny fatran'ny solitany tao Shily ny mari-pàna mangatsiaka tao Arzantina tamin'ity herinandro ity. Na dia nanambara aza ny governemanta Arzantina fa hahazo ny famatsiana ny solitan'izy ireo tsy tapaka ny Shiliana, mitady vahaolana hafa momba ny angovo ny Shiliana mba hiantohana ny famatsiana angovo ho an'ny firenena. Tamin'ity herinandro ity, nanapa-kevitra ny minisitry ny toekarena, ny angovo, ny fambolena sy ny Fidiram-bola fa hanafoana ny hetra amin'ny biôsfera mba hampiroboroboana ny fampiasana azy.
Manazava i Ecoperiodico (ES) fa mihatra amin'ny lasantsy sy solika ihany koa izany fanafoanana izany hetra izany, ary amin'izany fepetra izany, iray ampahatelon'ny vidin'ny lasantsy 1 litatra ny vidin'ny bioethanol sy ny biodiesel.
Chile decidió el miércoles eximir a los biocombustibles de un impuesto específico que pagan las gasolinas y el diésel para fomentar su uso, en medio de preocupaciones por un menor suministro de gas natural desde Argentina, su único proveedor del recurso.
Nanapa-kevitra hanafoana ny hetra manokana amin'ny biôsfera i Shily tamin'ny Alarobia, izay aloa amin'ny lasantsy sy solika ihany koa mba hampiroboroboana ny fampiasana azy ireo. Nitranga tao anatin'ny olana mikasika ny fihenan'ny famatsiana etona avy any Arzantina izany, izay hany mpamatsy an'ity loharanon-tsolika ity.
Manohy manazava ny fanamarihana fa saika manafatra ny solika rehetra ampiasainy i Shily, ary hanampy amin'ny fampihenana ny fiovaovan'ny vidin-tsolika sy ny famatsiana gazy ity fanapahan-kevitra ity. Iray amin'ireo faritra voakasika indrindra ny faritra avaratra ao amin'ny firenena. Avy amin'ny minisitry ny atitany ny iray amin'ireo tetikasa mahakasika izany faritra izany. Namoaka tao amin'ny bilaoginy mikasika ny fifanarahana tamin'ny Oniversiten'i Tarapacá mba hampivelatra ny vokatra Tanatanampotsy (Jatropha) amin'ny tany 1500 hekitara ny minisitry ny atitany. Ny Tanatanampotsy dia hazo hetry (arbuste) ampiasaina any Eorôpa sy Afovoany Atsinanana mba hamokarana akoranafo biolojika.
Mikasika ny biôsfera ihany, fa tsy mifandray amin'ny krizy ara-angovo, Atinabiotec (ES), bilaogy iray mamoaka vaovao momba ny biô-teknolojia, dia namoaka ny fanadihadian'ny “The Insurance Society Co-op” mampitandrina ny loza amin'ny fampiasana akoranafo biolojika eo amin'ny tontolo iainana. Iray amin'ireo olana: dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny fihafanan'ny tany ny fampiasana akoranafo biolojika, saingy amin'ny lafiny iray ihany, mety hampitombo ny fampiasana ny tanim-pambolena hanaovana famokarana akoranafo biolojika ihany koa. Mety hampihena ny velarantany azo anaovana fambolena ao amin'ny firenena izay mbola misy mosary izany.
Nilaza ireo gazety sy televiziona eo an-toerana fa hovatsiana ny etona hampiasaina any an-trano. Ny toe-javatra sarotra indrindra dia ireo orinasa tsy maintsy mitady loharanon-tsolika hafa mba hahafahana miasa.